Free Download Adobe jilitaankii Pro CS6 u Mac | MacArsenal
Adobe jilitaankii Pro CS6 waa nooc ka mid ah tafatirka software video oo natively oo si toos ah u shaqayn karo mobile ugu dambeeyay. Waxaa sidoo kale ku qalabaysan customizable ah iyo sidoo kale interface aadka u dareen leh. Its aalada macaan iyo sare ku ool ah ka badan abid. Intaa waxaa dheer, ku shaqayn karaa la-dhexgalka ee Adobe.
Natively oo markiiba shaqee mobile ugu dambeeyey
Hagaaji in Adobe jilitaankii Pro CS6 in ay ka shaqeeyaan wada noolaanshaha oo kolkiiba ugu dambeeyay ee mobile, qaabab ceeriin iyo DSLR, HD. Hagaajinta xasiloonida iyo hufnaan ku darto qalabka-dhan cusub ee loo fududeeyo aalada tafatir ah, kaas oo awood kuu dhammayn ka hor waqtiyada soo-saarka ugu daran madax adayg.
A customizable, interface aadka u dareen leh
Software Adobe jilitaankii Pro CS6 isku daraa hufnaan la yaab leh iyada oo amar ku ah, hagaagtay user interface. Thanks to this customizable, interface aadka u dareen leh, waxaad arki kartaa in ka badan oo aad video iyo aruuray yar. Waxaa jira baar customizable button in monitor darfahoodii cusub. Guddida mashruuca cusub squarely xoogga saaraa hantida iyo awood u clips in la labeenta, hufaa, oo lagu calaamadeeyay kor u tafatirka. A design cusub audio track, oo mitir oo hagaagay, oo ah guddi fiicni hagaajinta sameeyo dhawaqa fudud ka badan ka hor shaqeeya.
Aalada macaan iyo-ool sare
Adobe jilitaankii Pro CS6 waxaa ka mid ah taageero hooyo ARRI Alex sidoo kale kaamirooyin Canon shaneebada EOS C300. Waxaa sidoo kale ku qalabaysan loo maqli karo kala joogsi lahayn. Iyada oo dhaqso Project workflows guddiga iyo interface user la safeeyey workflows ka sii macaan yahay, oo ka sii sare-ool ah.
La shaqee is-dhexgalka ee Adobe
Tilmaamo badan oo ka badan Adobe jilitaankii Pro CS6 waxaa lagu soo bandhigay in software video tafatirka finalka cross-madal ka Adobe. Tusaale ahaan, waxaa si dhow u la dhexgeliyey Adobe Speed ​​Fasalka? CS6 iyo sidoo kale workflows degdeg ah roundtrip audio la Adobe Xulashada? iyo is-dhexgalka kugu dhagan la Adobe Photoshop ?, taas oo laguu suurogeliyo in ka badan si habsami leh oo si dhakhso ah u shaqeeyaan.
Xabbaddu Software: xabbaddu FTP Client Mac Mac, waayo,
Manga Studio hore u Mac
> Resource > Mac > Adobe Systems: Adobe jilitaankii Pro CS6 u Mac